Home Wararka Midowga Yurub oo dib u eegis ku sameynaya lacagta la siiyo ciidanka...
Midowga Yurub ayaa sheegay in ay dib u eegis ku sameyn doonaa lacagta ay siiso ciidanka AMISOM ee Kenya. Lacagtii uu Midowga Yurub siin jiray ciidamada Kenya ee la dagaalamaya Al-Shabaab ee gudaha Soomaaliya ayaa laga jaray 66 boqolkiiba oo ah in ka badan $45 milyan. Arrintan ayaa dhaqangeleysa sannad maaliyadeedka cusub ee bilaaban doona bisha Luulyo, maaddaama ay soo dhowaatay taariikhda la qorsheynayo inay ka baxaan Soomaaliya kaas oo ay hogaaminayso Qaramada Midoobay, sida ay qoreyso qaar ka mid ah warbaahinta Kenya.
Dhanka kale, howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (Amisom) ayaa qorsheynayay in bisha Diseembar ciidamada Soomaaliya lagu wareejiyo amniga dalka. Khuburada arrimaha ammaanka ayaa arrintasi su’aal gelinaya. Ciidamada Kenya ayaa bishii October ee sanadkii 2011-kii gudaha u galay Soomaaliya si ay halkaas ugula dagaallamaan xooggaga Al-Shabaab oo ay sheegeen inay khatar ku hayeen amniga gudaha Kenya. Fariisimaha milatariga Kenya ee Soomaaliya ayaa ku yaalla deegaannada hoos taga maamulka Jubbaland.
Soomaaliya waxaa ku sugan 19,250 oo askar ajaaniib ah oo ka kala socda dalalka Kenya, Burundi, Itoobiya, Ugandha iyo Jibuuti, kuwaasoo dagaal kula jiray ururka Al-Shabaab.